Axmed Mirre madaxweynuu istaahilaa Faizal na Jailka Mandheera by Abdi Mustafe
Monday, 15 August 2016 13:45
Markuu Axmed Mirre dalka xoraynayay Faizal na basaas koonfur laga soo diro ayuu ahaa.
Faizal C. Waraabe maalin baa nalaga wada qoray skuulka REES ee bariga Hargiesa ku yaal. Waagaaba marka ardaydu is dilaan ama is caayaan Faizal baa carari jiray oo macal limiinta u soo sheegi jiray oo odhan jiray macalin laba arday ayaa halkan isku dilaya. Dabeed marka skuulka laga rawaxo wiig walba cid uu Faizal ashkateeyey ayaa dibada ku garaaci jirtay. Hadana waxba kuma qaato ee halkii buu ka wadan jiray basaas nimada uu ardayda wax ka sheegayo. Sidaa darteed Faizal waagaaba muu miyir qabin manuu fayoobayn oo hasha geela cunta ee cabaada ayuu ahaan jiray. Waxaan xasuustaa maalin arday la odhan jiray Abdi Warsame uu Faizal soo qabtay intuu wax ashkateeyey oo uu ku yidhi ( man dakhala maalaa yac nih ...Laqiya maalaa yadiihi) oo dabeedna intuu dhulka dhigay uu ciid dhegaha uuga buuxiyey.
Faizal sidii buu ku weynaaday oo horta nalamuu dhamaysan skuulkii oo waxaan filayaa in uu Xamar u bedeshay weliba tacliintana kumuu fiicnayn ee damiin buu ahaa cabaad badan. Dabeed waakii ku danbeeyey in uu General Gani basaas u noqdo ee xidh-xidhay inamadii UFO. Kiibaa maanta Axmed Mirre oo wacdarihii uu dhigay markii Faqash la eyayay cid waliba ka war heyso oo ilaa hada madaxa lafaha badh maqan yiin wax ka sheegaya. May ahayn Faizal in uu maanta Hargiesa tax-taxaasho ee waxay ahayd in uu Jailka mandheera dhex fadhiyo oo cidiyuhu ku baxaan oo injirtu ku gasho oo uskagiisa laga dheeraado dabeedna uu sidaa ku baqtiyo oo sidii abu-lahab laa aaso.
Iminkadaa uu Faizal ku af-lagaadooday Axmed Mirre waxay tahay cidii aragtaaba inay ka jarto oo wejiga candhuuf kaga tufto. Muxuu taray bal Faizal een basaas nimo iyo cay iyo wareer iyo ucid uu bur-buriyo iyo waali aan xad lahayn oo uu kolba qof isku waabo. Hadaba Faizal cidii aragtaaba ha xasuusiso inuu basaas ahaa welina sidii uun uu madaxtooyada Silaanyo basaas uugu yahay oo goor ay noqotaba dadka laga qaban dooo oo Jailka loo diri doono ilayn ma miyir qabo oo in uu dadka qaar dhagax iskaga dhuftaa waxba kuma aha kol hadaannu fayoobayn e.
More in this category: « A welcome Somali voice at the Minnesota State Capitol BASHIR GOTH :Akhriso Gabay Carabi Ah Oo La Yidhaahdo "Waxyiga Iboniga - Oracle of Ebony" »